China yakashongedzwa zvigamba fekitori uye vagadziri | SJJ
Tsika yakashongedzwa chigamba, insignia kana epaulettes akakwana kumauto, Mukomana Scout, ngowani, sikafu uye yunifomu yese. Nesuwo tinogona kuita nezvakarukwa zvigamba & chenille zvigamba.
Embroidery ndeyakareba hunyanzvi, kwave nezviuru zvitatu zvemakore shanduko kusvika zvino, kubva kune epamberi ruoko ruoko akagadzira machira kusvika iko zvino auto-muchina wakagadzirwa nezvakarukwa. Iko kudikanwa kwekushongedzwa kuri kuwedzerawo zuva nezuva, kunyanya zvekushongedza zvigamba zvinonyanya kushandiswa kwemauto, mapurisa emoto department, kuchengetedzwa, dhipatimendi rehurumende, nhabvu yemitambo & timu, yunifomu yekumiririra yunifomu, scout neckerchief, zvakare inogona kuiswa pamakepeti uye mabhegi.
Maitiro edu ekushongedza akatanga kubva kuTaiwan kubvira 1984, iyo misono iri yakasimba kwazvo, uye merrow muganho wekupedzisira tambo inonamira kumashure kumashure yakasimba. Isu tine maartist uye mahunyanzvi ane zvizere zviitiko, tinogona kugadzira zvigadzirwa zvemifananidzo zvinoenderana neyako dhizaini. Tsvaga mhinduro yakanakisa yekuzadzisa dhizaini yako mukati maawa makumi maviri nemana. Saka sarudza isu, nyore uye nekukurumidza tora yako dhizaini. Uye yedu Dongguan fekitori ine angangoita 58 epamberi michina, mumwe muchina anogona kuwana 20-30pcs zvakafanana yakashongedzwa logo zvigamba panguva imwecheteyo. Uku kugona kwepamusoro kunogona kutibatsira kuti tipe zvakachipa zvemitengo yekushongedza kune vatengi vedu. Kusvikira kune gumi nemaviri mavara mune chimwe chigamba, akasiyana mavara kuti yako dhizaini ive yakajeka.
Isu tiri fekitori yakatenderwa neDisney, United States Scout yakatenderwa fekitori, mauto eJapan, mweya wekuzvidzivirira wemauto unobvumidzwa fekitori, uye takabatana pamwe nemakambani mazhinji anozivikanwa ekupfeka. Chokwadi iwe uchagutsikana nehunhu hwedu. Ndapota usazeza kutisangana nesu uye tora yako yakasarudzika zvigadziko zvakagadzirwa.
** Thread: 252 stock color tambo / yakakosha tambo yesimbi simbi & esimbi sirivheri / ruvara kuchinja UV inonzwisisika tambo / kupenya murima tambo
** Kumashure: twill / velvet / kunzwa / sirika kana rimwe jira rakakosha
** Kutsigira: Iron pane, bepa, plastiki, Velcro, inonamira
** Dhizaini: yakagadzirirwa chimiro uye dhizaini
** Border: merrow muganho / laser akacheka muganho / kupisa akacheka muganho / ruoko akacheka muganho
** Saizi: yakagadzirirwa
** Dhirivhari: Mazuva 3-4 ekuteedzera, mazuva gumi ekugadzirwa kwakawanda
Pashure: Masoja Mari
Zvadaro: Luxury Lanyards - ine yekumhanyisana kana mhango mavara
China Bheji Patch uye Yakarukwa Bheji mutengo
China Yakanakisa Mukomana Scout Patches
China Yakanakisa Mukomana Scout Zvimedu Zvinyorwa
China Yakanakisisa Mukomana Scout Patches Vatengi
Tsika dzakashongedzwa Zvimedu
Tsika dzakashongedzwa Zvimedu Hapana Chishoma
Tsika Yakashongedzwa Patch
Kugadzira Yakashongedzwa Patches
Yakarukwa Logo Patches
Yakarukwa Mazita Patches
Yakarukwa zvigamba Zvekutengesa